Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay colaadaha ka soo cusboonaaday hiiraan – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay colaadaha ka soo cusboonaaday hiiraan
Axmed Madoobe oo ka hadlayay Kismaayo ayaa sheegay in aanu garaneyn macnaha uu leeyahay dagaalka Beledweyn, isla markaana loo istaago sidii loo joojin lahaa.
“Dagaalka ka socda Beledweyn macnaha uu leeyahay ma garan karo, laakiin waxaa oran lahaa in loo istaago in la joojiyo colaada oo dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada la isugu tago sidii loo joojin lahaa”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Waxaa uu nasiib darro ku tilmaamay in iyadoo laga sugayo in Maamul goboleed loo dhiso Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe in dagaal qabiil uu bilowdo.
“Anaga Soomaali ah, aan isu gurmano, aan xalisano cida is heysata iyo cida wax kala tabaneysa, arrinta Hiiraan waa in si deg deg ah wax looga qabto”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in juhdi badan la geliyo sidii maamulka labada gobol u dhismi lahaa.
Dadka reer Beledweyn ayaa isugu darsamay colaad iyo fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle, iyadoo kumanaan qoysas ay ka barakaceen dagaalada iyo fathaada ka jira magaalada.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maanta uu wada hadal lagu xalinayo dagaalka uu ka bilaaban doono galbeedka magaalada Beledweyn, isla markaana la kala qaadi doono maleeshiyaadka dagaalamaya.